Rafitra fitsarana farany tsara any Dubai: ny fomba fiasa ary ny antony tsy tokony hanahirana anao. 0000
Nanazava ny rafitry ny fitsarana farany tsara any Dubai.
Raha efa nitsidika na nipetraka tany Dubai ianao dia mety ho nandre momba ny rafi-pitsarana eto. Ny tsara sy ny ratsy ary ny zavatra rehetra eo anelanelany. Na dia mipetraka amin'ny firenena vaovao aza ny fananana fahalalana rafitra ara-dalàna vaovao, misy mpitsoa-ponenana sasany manahy ny amin'izay hitranga raha maloto amin'ny lalàna izy ireo - indrindra fa misy karazana lalàna isan-karazany mihatra manerana an'ity tanàna ity.
Dubai Courts dia mampihatra ny rariny any Dubai amin'ny alàlan'ny famaritana mazava sy haingana amin'ny fitsarana ny fitoriana, ny fanatanterahana ny safidy, ny fanapahana, ny didim-pitsarana, ny fifanarahana ary ny fanamarinana ny rakitra. Miezaka manome fahafaham-po ho an'ny olona amin'ny alàlan'ny fitazonana diplaoma haitao havaozina mba hanomezana rariny haingana ho an'ny fiadanan'ny fiarahamonina. Ny rafi-pitsarana tsara indrindra any Dubai dia nahazo laza eran'izao tontolo izao hiantohana ny zon'ny olom-pirenena sy ny fahalalahana eo amin'ireo mponina ao aminy.
Ny iraka dia ny ho mpitarika amin'ny fomba fitsarana. Noforonina tamin'ny taona 1970, Dubai Courts dia mbola manome lanja ny genius, fitoviana, ny fahamarinana, ny hatsarana, ny fiaraha-miasa ary ny fizakantena. Dubai Courts dia miankina amin'ny fizotrany mety, teratany mahay, ary teknolojia vao haingana novolavolaina. Ny serivisy sasany, amin'ny ankapobeny, dia misy fiantsoana mahomby, asa, sivily, ara-dalàna ary fanamarinana ampahibemaso, ny fanatanterahana didim-pitsarana, ary ny fanamarinana ny mpisolovava.
The Tranonkala Dubai Courts manolotra serivisy an-tserasera.
Io dia ahafahan'ny antoko manao raharaha ara-dalàna, hanaraka ny fandrosoany, ary hijery ny fitakian'izy ireo.
Ny fitsipiky ny fitsarana Dubai dia manomboka miasa. Tamin'ny voalohany dia noferana ho an'ny faritra jeografika ny fahefan'ny DIFC Courts.
Fitsarana ny Ivon-toerana Iraisam-pirenena any Dubai (DIFC)
Ny DIFCA dia miandraikitra ny lalàna sy lalàna mifehy ny hetsika tsy ara-bola ao anatin'ny DIFC, ao anatin'izany ny orinasa, ny lalàna mifehy ny asa, ny lalàna mifehy ny varotra ary ny lalàna momba ny fananan-tany. Ny Dubai Financial Services Authority (DFSA) dia miandraikitra ny lalàna mifehy sy ny lalàna mifandraika amin'ny serivisy fanampiana sy ny raharaha ara-bola rehetra ao anatin'ny DIFC.
Ankoatr'izay, ny DIFC dia nanangana faritra tsy andoavam-bola, mikendry ny hampiroborobo ny tontolo mitombo sy mandroso ao UAE dia manolotra rafitra mifehy tsy manam-paharoa sy mahaleo tena hikarakarana faritra midadasika kokoa.
The Fitsarana DIFC ampiasao ny lalàna sy ny fitsipika raha tsy hoe eken'ny roa tonta mazava fa misy lalàna iray hafa an'ny DIFC mifehy ny fifanolanana ataon'izy ireo.
Ny Fitsarana DIFC dia manana ny fahafahana hanao baiko ary manome torolàlana momba ny hetsika ataon'izay misy tohiny, ao anatin'izany:
Ny fitsipika ao Dubai dia mamaritra ny lalàna rehetra eo ambanin'ny lalàna DIFC;
Tafiditra amin'ny fangatahana hetsika tokony hatao;
Didy na anton-javatra;
Didy vita amin'ny fepetra izay mifanaraka amin'ny Filaharana toy izany ary koa fety iray hafa;
Didy izay fanamavoana;
Ny fanondroana ireo olana any amin'ny Fampanoavana
Ny Fitsarana DIFC dia manana ny fahaizana mampihatra mari-pankasitrahana, baiko na fitsarana voamarina. Ny Lehiben'ny mpitsara dia manangana mpitsara ny fitsarana ambaratonga voalohany ary manana fahefana amin'ny maha mpitsara mpanatanteraka azy hamoaka didim-panatanterahana ao amin'ny DIFC.
Tamin'ny volana Jona 2012, nisy torolàlana ofisialy ofisialy natao mba hanazavana ny fizotran'ny mpisolovava, ny orinasa ary ny olona mampiasa ny Fitsarana DIFC. Izy io dia manome antsipiriany momba ny fanapahana ivelan'ny DIFC any Dubai, UAE, GCC, ary manerantany. Ny firaketana dia manazava ny toerana sy ny fomba hanambaràn'ny fanapahan-kevitra ny vokatry ny fifampidinihana be loatra miaraka amin'ireo orinasa ambony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ara-dalàna napetraka tamin'ny Fitsarana rehetra ary azo ampiharina. Ny rakitra dia azo alaina amin'ny tranokala Dubai.
Lalàna ao Dubai: Fitsarana Dubai hanohanana ny olona niharan'ny fanondranana olona
A memorandum of understanding miaraka amin'ny Dubai Foundation for Children and Women, lasibatra ihany koa amin'ny fanaraha-maso ny fitondrana ratsy sy ny herisetra an-tokantrano amin'ny ankizy sy ankizivavy.
Al Mansouri dia nilaza fa ny fifanarahana dia mikasa ny hanana fiainana tsara ho an'ny olona tsy manana fiheverana ara-tsosialy. Nomeny ho vina iraisana io fiovana io.
Ny MoU dia kendrena hanakiviana ny fitondrana ratsy amin'ny tovovavy sy ny tanora, ny herisetra an-tokatrano ary ny fanondranana olona an-tsokosoko. Ny DFWC sy ny DCD dia nanaiky ny hamorona tahiry manana fahefana hanarahana tranga toy izany. Nanaiky ihany koa izy ireo ny hanao gara vaovao ho an'ny angon-drakitra, hanakalo fahaiza-manao amin'ny raharaham-pitsarana ao Dubai, handray anjara amin'ny fiofanana anatiny isan-karazany ary hametraka ezaka fanabeazana sy fivoriana fanairana, atrikasa ifanakalozana, seminera ary hetsika.
Ny MOU dia manome ampahany miavaka:
"Ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny taktika miaraka amin'ny DFWC dia dingana vaovao hanohanana ireo fanandramana natao hametrahana fiaraha-monina mirindra sy mirindra izay miantoka ny fahamarinana, ny fitoviana ary ny filaminana mifanaraka amin'ny tanjon'ny Dubai Strategy 2021."
Mandritra izany fotoana izany dia nidera ny fiezahana hamolavola fiaraha-miasa amin'ny DFWC i Al Basti mba hanamafisana ny hetsika mitohy amin'ny fialofana, fiarovana ary fanohanana ny herisetra an-tokantrano sy ireo tra-boina amin'ny fanondranana olona mifanaraka amin'ny fandaminana ny zon'olombelona iraisan'ny lalàna DCD sy Dubai.
"Ny tetikasanay vaovao dia hamolavola rafitra efa niorenany hanohanana ny ezaka nasionaly mifantoka amin'ny fanomezana fiarovana ara-tsosialy ho an'ireo vondrona marefo ary hampihena ny hafainganan'ny herisetra an-tokantrano ao UAE, izay ahitana ny hetsika ambany indrindra eto an-tany," hoy i Al Basti.
Ny herisetra an-tokantrano sy ireo tra-boina amin'ny fanondranana olona tsy ho ela dia homena fanampiana sy fiarovana ara-teknika noho ny fifanarahana vaovao avy amin'ny Departemantan'ny Fitsarana ao Dubai.
Hatramin'izao, ny UAE, miaraka amin'ireo manampahefana mpampihatra lalàna iraisam-pirenena sy isam-paritra, dia nampiseho ezaka mitombo hiadiana amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko. Ny UAE dia manolo-tena amin'ny fampiharana rafitra miady amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko efatra noforonina mba hisorohana ny heloka bevava, hampihatra ny lalàna, hanasazy ireo izay manao ny heloka bevava amin'ny fanondranana olona ary hanome ny fanampiana ilain'ny traboina.